China Yepamusoro Yemhando Chitubu Shock Absorber-Z11069 vagadziri uye vanotengesa | TANGRUI
Yakakwira Mhando Yekutenderera Yekushusha Mubato-Z11069
Zvekutyaira zvezuva nezuva uye zvinorema zvekufamba-munzira zvakafanana, zvinotyisa zvinochengeta Jeep yako ichimhanya zvakanaka uye inodzivirira kumiswa kwayo. Kunyangwe iwe uchida kutsiviwa, kukwidziridzwa kana kuzadzikiswa zvizere, Tangrui inopa kuwanda kwekuvhunduka kwakaringana kungangoita chero gore uye modhi yeJeep pamusika.
Chete Izvo Zvakanyanya Kutengeswa Pano
Se jeeper, iwe unoziva kuti mhando yeinjiniya inotarisirwa kumhanya kwakanyanya, uye nesu tinoitawo. Yedu yekushamisika chikamu chinotsiva chinouya kubva kumusoro vagadziri kubva Pro Comp Kumiswa uye Rubicon Express kuna Masikati naBilstein, ese akaedzwa uye anoratidzwa akagadzirira rig yako. Twin chubhu, monotube, uye matangi emodhi zvese zviripo kune chero chinhu chauri kutora. Kune epamberi emigwagwa, isu takakufukidza nekuvhunduka kwakagadzirirwa kusimudzira pamwe nekusimudza makiti ekuvandudza kwe DIY.
Zvakanakisa zvekumisa zvikamu uye zvishongedzo hazvireve zvakawanda kana zvikasakwanira yako rig, asi kuTangrui tinoita shuwa kuti iwe unowana yakakodzera machisi. Yedu yepamhepo katarogu, inogara iri padanho pane yedu yakazara stock online uye munharaunda, inowirirana neyako mota modhi yekunongedza zvinoenderana uye inokupa iwe ruzivo rwese rwaunoda kuenzanisa, kutenga nekuisa.
Kuzvipira kune Vatengi Vedu
Isu tinodada kwete chete mune edu epamusoro-giredhi zvigadzirwa asi zvakare nemhando yepamusoro sevhisi yatinopa kune vatengi. Kunze kwehupfumi hweruzivo pamhepo, timu yedu yenyanzvi inotora chero mibvunzo yauinayo kuti iwe ugone kuita sarudzo ine ruzivo nezvezvaunotenga. Pamusoro pezvo, zvigadzirwa zvese zvinotengeswa paTangrui zvinotsigirwa nemazuva makumi mapfumbamwe emutengo wemutambo. Kana mukwikwidzi ari kutengesa izvo iwe zvawakaraira zvishoma pane izvo iwe zvawakabhadhara, tiudze isu kuti tidzosere pamusiyano wemutengo. Nezvikamu zveprimiyamu, nyanzvi dzakazvipira uye mitengo isingakundike, tenga nesu uine chivimbo chakazara chekuti Jeep yako iri mumaoko akanaka.
Ride Riri nani
Uine chinotyisa chinotsiva chinotsiva, mota yako ichaita zvirinani kupfuura nakare kese uye iwe unonzwa mutsauko ipapo paunorova mugwagwa. Iwe unozoona yakagadziriswa kugadzikana kana uchityaira munzira dzine matope, kubata zviri nani kana uchikwenya hova dzisina kudzika uye kunyaradzwa kwakakwana kana uchikambaira munzira dzisina kuenzana. Kuti uwane kutasva kwakadzora uko kunochengeta matai ako achibata pasi pasi pako kuti urambe uchingobatana, unoda Jeep zvinotyisa kuti utsive zvekare, zvakasakara uye kukudzosera mukutonga muchigaro chemutyairi. Nesarudzo yedu yakakura yemasuo maviri uye mana emikova mamodheru ayo anowanikwa sevanhu vamwechete kana vaviri vaviri zvichienderana nechiratidzo, iwe uchave neicho chinotariswa kukwira nekuita zvirinani neaya anogara kwenguva refu, anogara kwenguva refu ekuvhunduka anopinza.
Kana iwe uchitsvaga yekuvhundutsa absorber yeJeeps kana marori, saka iwe wauya kurudyi nzvimbo. Isu tinopa sarudzo kubva kune akanakisa mabhureki muindastiri uye nemitengo isingakundike. Yedu yemazuva ese mitengo yakaderera uye 100% yemutengo wemutambo vimbiso unoona kuti iwe unochengetedza zvakanyanya paunotenga kukwidziridza kana kugadzirisa mota yako. Tenga muunganidzwa wedu nhasi kuti utore mukana nemitengo inoshamisa iyi uye upfeke Jeep yako, rori kana SUV nemidziyo yaunoda kuti imhanye kumusoro kuita.
Iko hakuna chinhu chakangofanana nekumhanya pamusoro penzira uye kunzwa mukutarisira kwauri kuenda. Asi matambudziko anogona kumuka kana mota yako yemhino-ichinyura kana iwe uchimedura kana kuzununguka pasi pako. Kana zvirizvo, saka inguva yekutsiva yako yekuvhundutsa absorber uye kukudzorera iwe kudzora kunze munzira. Pano paTangrui, isu tine hombe sarudzo yekuvhundutsa mafuru kubva kumakambani anotungamira muindastiri sePro Comp Kumiswa, King Shocks uye Skyjacker kusarudza iyo yekuvhundutsa absorber yemota yako isiri-munzira kana mutyairi wako wezuva nezuva.
Brand ZveMitsubishi, Lancer
Pashure: TangRui Chitubu Shock Absorber-Z11068
Zvadaro: 28313SC010 uye 28313SC011 STEERING KUKONKODZA KweSubaru -Z1253
Hood Shock Inotora
Shock Inotora Bolt
Shock Yekupinza Rubber
6L8Z-30-78AA Uye YL823078AA Kudzora Arms KweK ...
High Quality mudhiraivho knuckle For Volkswagen Iva ...
High Quality Rear Kuruboshwe Kumiswa Kugadziridza Kit Ca ...
Shock Yekupinza Rubber, Hood Shock Inotora, Wheel Hub, Tire Bhora Rakabatana, Shock Inotora Bolt, Mberi Kudhiraivha Gonhi,